Ọrụ ndị isi “mmemme”: mmetụta nke itinye koodu na nhazi na igbochi afọ akwụkwọ | Ọzụzụ nghọta
Mkpa nke ndi isi oru n'ọtụtụ akụkụ nke ndụ ka amaara ya, ọ bụghịkwa ihe ijuanya, anyị ejirila ọtụtụ isiokwu kwue maka ya; dịka ọmụmaatụ, anyị ahụla, mkpa ọrụ ndị isi dị n'ihe metụtara mgbakọ na mwepụna asụsụ, ka ịgụ na nghọta ederede, na creativeness.
Ọzọkwa, nyocha nke ọma gbasara ọrụ onye isi nwere ike inye aka kpaa oke n'etiti ụdị mgbaka dị iche iche.
Nsonaazụ kacha pụta bụ na ọtụtụ nyocha etinyela anya na ọ ga -ekwe omume ịkwalite ọrụ onye isi na ụdị ọnọdụ dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, na afọ ụlọ akwụkwọ ọta akara, n'imeaphasia na nelle nweta mmerụ ụbụrụ.
Ọ nwere onye gbalịrị ịhụ ma enwere ike ịbawanye ọrụ ndị isi n'ụzọ na -apụtabeghị, dịka ọmụmaatụ site n'ịmụta a na -akpọ ngwá egwu.
Ọmụmụ ihe nke Arfé na ndị na -emekọ ihe mere na -atọkwa ụtọ nke ukwuu, nke ndị ode akwụkwọ siri nyochaa yammetụta nke ọzụzụ mmemme kọmputa na ọrụ ndị isi.
Karịsịa, ha nyere otu ụmụaka dị afọ 5 na 6 ọzụzụ 8 awa na ọzụzụ nzuzo site na ikpo okwu dị n'ịntanetị (code.org); otu ụmụaka ahụ, tupu na mgbe oge ọzụzụ ahụ atụnyere otu ụmụaka ọzọ, nke emere ihe omume ụlọ akwụkwọ ọkọlọtọ na isiokwu sayensị achọpụtala maka afọ, site na ule nyocha na mgbochi ndị a:
Nnwale nnwale nke Elithorn nke BVN 12-18
Towerlọ elu nke London
Nọmba Stroop nke BIA
Mgbochi nke NEPSY-II
N'ikwekọ na atụmanya ndị nyocha ahụ, ụmụaka ndị sonyere na ọzụzụ mmemme kọmputa nwetara nke ọma arụmọrụ na -abawanye na nhazi na ule njikwa impulsivity.
Nsonaazụ ndị a, nke enwetara n'ime naanị otu ọnwa, bụ dị ka mmụba a na -eme n'amaghị ama nke emere n'ime ọnwa asaa.
Ọ bụrụ na ị na -eche maka ya, ihe a niile abụghị ihe ijuanya: mmụta nke nzuzo, n'eziokwu, ọ chọrọ inyocha nsogbu ndị ahụ nke ọma, chepụta usoro algọridim ma kewaa ọrụ n'ime ọtụtụ usoro na -enweghị ọsọ ọsọ; n'echiche, enwere ike chịkọta ikike ndị a na okwu "atụmatụ" na "mgbochi".
Ọ bụrụ na emepụtagoro data ndị a wee hụkwa mmetụta ya na ndụ ụmụaka na ndị na -eto eto kwa ụbọchị (dịka ọmụmaatụ, na arụmọrụ ụlọ akwụkwọ) a ga -enwe otu ihe ọzọ mere a ga -eji kwenye nzuzo ọrụ dị mkpa ka a na -etinye ya na usoro ọmụmụ ụlọ akwụkwọ.
Gịnị bụ ọrụ ndị isi?
Igha egwu na-eme ka ị mara ihe?
Mee ka ọrụ ndị isi n'ụlọ akwụkwọ sie ike
"Na -egwu egwu" yana ọrụ ndị isi. Ị funụrị ọ youụ ka mma
Ọrụ ndị isi na-ebu amụma ịghọta ederede na ọsọ ọsọ ọgụgụ
Otu esi atụle ọrụ ndị isi: ule ndị ejiri
Ihe mmeghari mmebi nke uche na ihe onye isi n’inweta akwara mm ụr ụ
Ofgwọ ọrụ ndị isi n’ụlọ akwụkwọ ọta akara - akụkụ nke abụọ
Ọrụ ndị isi na-ajụ oyi: Alzheimer vs. edere nke dị n'ihu
Arfé, B., Vardanega, T., Montuori, C., & Lavanga, M. (2019). Ịdebanye aha na klas nke mbụ na -akwalite ọrụ ndị isi ụmụaka. Frontiers na akparamaagwa, 10, 2713.
nzuzo, ọrụ nzuzo na ọrụ onye isi, ndi isi oru, mmemme na ọrụ onye isi, mmemme kọmputa
Ọrụ ndị isi “mmemme”: mmetụta nke itinye koodu na nhazi na mgbochi n’oge afọ akwụkwọ2021-08-172021-08-17http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/08/programmare-le-funzioni-esecutive.-leffetto-del-coding-sulla-pianificazione-e-linibizione-in-eta-scolare.png200px200px
Ọ na - eme neuropsychology na mmepe, okenye na okenye. Ọ na - emekọrịta ugbu a n'ọtụtụ ọrụ gbasara akụkụ ọgụgụ isi n'akụkụ ụfọdụ ọrịa neurodegenerative.
I nwekwara ike inwe mmasị
Kedu ihe bụ okwu ọmụmụ (na gịnị kpatara eji eji ha)
Ndụmọdụ bara uru maka "mgbatị ahụ" nke uche: Cognitivefun
Ụmụaka nwere onyinye: mata ọrụ ndị isi na ọgụgụ isiỌrụ ndị isi, ọgụgụ isi
Mmetụta nke covid na ọrụ ọgụgụ isiNeuropsychology